musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies Rory John Gates Wevadiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Chinyorwa chedu chinopa chinyorwa chizere cheRory John Gates Zvekucheche Nyaya, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Mararamiro, Hupenyu Hwekuda (musikana / mukadzi chokwadi) uye Hupenyu hwega.
Kuongorora kwakazara kwaBill Gates chokwadi chemwana kubva panguva yaaive mwana kusvika paakakura kuva munhu akanaka murume.
Hupenyu nekusimuka kwaRory John Gates. 📷: Postoast, Bornrich, uye Biography-mutsara
Ehe, iwe neni tinoziva iye Mwanakomana wa Bill Gates ndiani anopokana mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakafunga kuverenga Rory Gates's biography, izvo zvinoshamisa. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Rory John Anopa Nyaya yeChidiki:
Rory John Gates muhuduku hwake. Haasi kutaridzika sekakanaka here ..? 📷: postoast
Kune kutanga, Rory John Gates akaberekwa nomusi wa 23 Chivabvu 1999 kuna amai vake, Melinda Gates (anobatsira weAmerica), uye baba, Bill Gates (imwe American bhizimusi magnate) muguta reSeattle, Washington, USA.
Kuzvarwa kunaBillionaire vabereki zvirokwazvo kunoita kuti munhu anzwe akakosha. Wedu chaiye Rory akauya pasi pano sewechipiri wevana vatatu, akaberekwa mumubatanidzwa pakati pevake vakapfuma kwazvo, vane rupo uye vane mukurumbira vabereki vanofananidzirwa pazasi.
Sangana naRory John Gates vabereki, Bill Gates naMelinda Gates. 📷: rombo
Zvakare kutarisa., Rory ndiye Mwanakomana wekutanga wemhuri yaGates. Kuve chete mwanakomana wechibhirionari zvingangoita kuti iwe ufunge kuti achazowana dzimwe rombo dzakakosha. Kuisa izvi mupfungwa hazvipe mufananidzo chaiwo wehupenyu hwaJohn Rory Gates's hwepakutanga nyaya.
Rory John Gates nyaya yehudiki yakasiyana kwazvo. Maizviziva here?… Amai vake nababa vake vakatevera mitemo yakaoma yekurera mubereki, iyo yaiita kuti Rory mudiki asaonekwe semwana akapfuma akapfuma. Iyi nzira yekusimudzira yakagamuchirwa naRory John Gates vabereki vanopfupisa nhoroondo yake yehucheche.
Rory John Gates Mhuri Yemhuri:
Haichisiri nhau kuti Rory arumbidza kubva kune imwe yehupfumi hwemhuri yemhuri iripo pamusoro penyika, munguva dzichangopfuura. Kunyatsotarisa mumhuri yemhuri yaRory Gates kunoratidza kuti America ine dzinza remarudzi, neChirungu, yeIrish, ChiGerman, uye Scots -Imhuri yemhuri.
Kunyangwe apfuma sei vabereki vaRory John Gates, vaviri vakagara vakatsigira pfungwa yakakwirira yetsika. Kuona kuti Rory nevanun'una vake vakura kuva mutoro, Bill naMelinda vakavaisa pasi pehutongi hwekusava nefoni kubva vava nemakore gumi nematatu. Magnificent !! Handizvo here?
Rory John Gates Hupenyu hwepakutanga - Kukura Semwanakomana waBillionaire:
Kukura pamwe nehanzvadzi dzake, Phoebe Adele naJennifer Katharine Gates, Rory aifanira kupedza iro basa raakapiwa naamai vake nababa vake. Iwe waive wakasarudzika kumitemo yevabereki vaJohn Rory Gates. Sezvineiwo, Rory nehama dzake vese vakawana mari muhomwe yeavo mabasa epamba avakapedza.
Rory akakurira pamwe nevanun'una vake vanofara uye vanonyemwerera hanzvadzi. 📷: mukurumbiraXYZ
Uyezve, Rory aive mwana anonyara uye aive akachengeta chimiro chakaderera muhupenyu hwake hwese. Akatanga kuvandudza kufarira uye kuziva nezve nyaya dzepasi rose pazera diki. Chido chake chekubatsira mukupedza matambudziko mazhinji epasi rose munguva pfupi iri kutevera anogona kutungamira mukuchinja kwakadai, sababa vake.
Rory John Gates Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Panzvimbo pekuvimba nehupfumi hwevabereki vake, Rory akave akarereka pakuvandudza hunyanzvi hwake hwekuwana kunyange kubudirira kukuru mune ramangwana. Akanyanya kutarira kuzvidzidzo zvake uye akava nechokwadi chekuti akaita mamakisi akanaka muzvidzidzo zvake.
Chimwe chinhu chakatora basa rakakosha mukuwedzera kukura kwaRory muzvidzidzo zvake vabereki vake. Bill naMelinda Gates vaifarira chaizvo izvo zvaidzidziswa nevana vavo. Izvi zvaiwanzovatora kuenda kunzvimbo dzekunodzidzisa kuti dzijekesere nezvetsika dzakasiyana uye nhoroondo.
Pane dzimwe nguva, kunyanya panguva yekushanya Rory aigamuchira zvidzidzo zvesaenzi kubva kuna baba vake. Rory akapinda chikoro chakazvimirira kwazvo muSeattle - Chikoro cheLakeside.
Rory Gates aive musanganiswa weLakeside School muSeattle. 📷: kudzidza
Bill Gates Mwanakomana Wenyaya- Kutanga Kwaakaita:
Pakutanga, mukomana mudiki aive achiri kusarudza nezve tarisiro yake yemunguva yemberi asi aikoshesa zvidzidzo zvake. Pazera ramakore gumi, akanyora nhetembo paFizikisi yechiedza inozivikanwa saRory's Diamante Poem iyo yakataura mwenje, nyeredzi uye gomba dema. Mushure mekunge baba vake vaburitsa nhetembo yake, Rory akawana mukurumbira pakati pevanhu vazhinji vakafadzwa nekunyora kwake kukuru.
Unogona kuzvitenda here? Akauya neiyi nhetembo inoyevedza pazera duku kudaro. 📷: magedhi
Rory akafunga kutevedzera tsoka yababa vake yekuve muzvinabhizimusi mukuru pamwe neruzhinji rwekurumbidza vamwe. Kutanga, akatanga kupa kune rubatsiro kune chimwe chikamu chimwe muzvitatu chemari yake muhomwe. Chechipiri, Rory akanyoresa kudzidza Computer Science uye Economics paYunivhesiti yeDuke. Akazowana MBA yake muBhizinesi kubva kuFuqua Chikoro chebhizinesi.
Rory Gates Mugwagwa weFame Nhau:
Kuve mugari wenhaka kune mumwe wevakapfuma kwazvo pasi pano kunoreva ramangwana rakabudirira raRory. Nekudaro, chiziviso chakaitwa nababa vake kuti vape imwe yeupfumi hwake (madhora zviuru zvina makumi masere emadhora) kupa rubatsiro zvinongoreva kuti Rory aifanira kushanda nesimba kuti abudirire.
Nzira yekuenda kumukurumbira chaiyo haimbofi yakafamba zvakanaka. Nguva zhinji, Rory aifanira kutsungirira zvipingamupinyi zvekupinda hurukuro dzinoshungurudza uye kugara zvakaoma bvunzo kuti akwire kumusoro kwekubudirira.
Kuti awane hunhu hwakanaka, Rory aifanira kukunda kurarama mumimvuri yemukurumbira wababa vake. Ndokunge, aifanira kuzobudirira nenzira yake yakasarudzika kuti aiswe zita rake nezvaakawana.
Rory Gates Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Rory aisafanira kuita zvakawanda mune mamwe kuti ave nemukurumbira. Akasimuka ave nemukurumbira nekuda kwekuzvarwa kwake mumhuri yaBill Gates. Kunyangwe achinyara uye zvisingawanzoita pachena kune vanhu, vanhu vazhinji vauya kuzobvuma kuvapo kwake.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekuburitsa chinyorwa ichi, Rory John Gates ndiye mumwe we vagari venhaka kwazvo munyika. Kuita kwake nerunyararo uye nhetembo zviito zvinoratidza kuti akagadzirirwa kuwanikwa patsva kwezvinhu zvakakosha zvepasirese. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rory Gates Anoda Hupenyu- Musikana, Mukadzi, Vana:
Mibvunzo yakawanda yakabvunzwa nezvehukama hwaRory John magedhi Hupenyu. Verenga uchienderera mberi apo isu tichipa mhinduro dzinonakidza dzekubvunza kwako kwakanyanya kwekufarira maererano nehupenyu hwaRory;
Rory John Gates Musikana musikana ndiani?
Mwanakomana waBill Gates haana kuroora panguva yekunyora bio yake. Kukura pasi pemirau yakaoma yevabereki vake, Rory Gates akave nechokwadi chekutarisa maitiro akakodzera mune zvese zvehupenyu hwake. Seye maitiro ake maitiro, Rory anosarudza kuchengetedza hukama hwake hupenyu hwakavanzika. Haana kuendesa kuma media enhau kunoburitsa kana kuisa chero mukadzi senge musikana kana mukadzi wake kubva pakumuka kwake mukurumbira.
Rory John Anopa chero Vana here?
Mwanakomana wemabhiridha haana vana kubvira May 2020. Haasati ataura kufarira kwake kutora basa rekuva baba munguva dzino dzichangopfuura. Kunyangwe achiri mudiki kwazvo, ingori nyaya yenguva chete asati azoroora uye baba vake vanakomana nevanasikana.
Rory John Anopa Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Muzana rino ramakore re21, imwe yeinonyanya kutaurwa mushure mehupenyu hwemhuri ndeyaRory John Gates. Verenga uchienderera mberi, apo isu tichikuudza iwe zvinonakidza zvokwadi nezveimwe yemhuri dzakapfuma pane zvese zvepasi pano kutanga naamai vaRory.
About Rory John Gates Amai:
Melinda Ann Gates ndiamai vaRory. Iye ndiAmerican philanthropist pamwe neaimbova general maneja kuMicrosoft. Kusimba kwake uye hutsika zvakabatsira zvakanyanya mukurera Rory kuti ave murume anoshamisa waari nhasi. Tarisa uone Rory's Supermom pazasi.
Rory Gates achinyemwerera padivi paamai vake, Melinda Gates. 📷: wekuroora
Zvinokufadza kuziva kuti Melinda nemurume wake Bill vakashanda-ruoko-mukubatsira vanhu vazhinji kuburikidza nerudo. Muna 2014 Iye nemurume wake vakapa US $ 28 bhiriyoni kuBill & Melinda Gates Foundation. Ichi chakave chimwe chezviito zverudo zvakaverengera Rory kuti ave mudiki philanthropist nhasi.
About Rory John Gates Baba:
William Henry Gates III anozivikanwa saBill Gates, ndibaba vaRory. Iye akabudirira bhizinesi reAmerica, muzvinabhizimusi, uye mushandisi wesoftware. Bill Gates ndiye mubatsiri weMicrosoft Corporation iyo yakabatsira zvakanyanya mukushandurwa kwemaccomputer muzana rino ramakumi maviri. Pazasi pane mufananidzo weumwe wevakapfuma varume vapenyu.
Ona maitiro aakaita sababa vake, Bill Gates. 📷: celebswikipedia
Kuwana kwaBill Gates kwainge kusiri kungobatsira nyika chete, asi, zvakamuwanirawo mukana wekupa hupfumi hwese hwaakamboda vana vake. Bill Gates anoonekwa semumwe wevateedzeri vemwanakomana wake Rory. Akave nechokwadi chekutumira Rory pachikoro chakanaka chose munharaunda yake uye akadzidzisa mwanakomana wake nguva imwe neimwe yavaive vari kushandira.
Havasi vese vana vakapfuma vanokura vane hunhu hwakakodzera uye hunhu. Nekudaro, Bill Gates akave nechokwadi chekuti mabasa ake haana kukanganisa mubereki wake sezvaairera vana vake aine hunhu hwakakodzera. Nhasi Rory akura jaya rine hanya uye rakatsika tsoka yababa varo kuita mabasa erudo nenzira yakanakisa, ririko kuona.
About Rory John Gates Vanababa:
Rory John Gates ane hanzvadzi mbiri dzinoti Phoebe Adele Gates naJennifer Katharine Gates. Munin'ina wake phoebe Adele Gates achiri kugara nevabereki vake iye achironga kunyoresa kukoreji. Phoebe anofarira kutora nyanzvi yekutamba uye kuimba sebasa rake rehupenyu. Ona kuti anotaridzika sei achinyemwerera mumufananidzo uri pazasi.
Phoebe ave achizivikanwa nerunako rwake rusinga peri kunyanya kana achinyemwerera. 📷: worldfamoushub
Jennifer Katharine Gates ihama yaRory mukuru. Kunyangwe aidzidza biology kuStanford University, anoda kutasva mabhiza. Jennifer akapinda mumakwikwi akati wandei akatasva mabhiza. Akave kazhinji achinzi senge yakafara gem. Tora mufananidzo wake pazasi uye kuyera wake wakanyanya runako pachako.
Rory's anofara hanzvadzi, Jennifer Katharine Gates. 📷: pinterest
About Rory John Gates Paternal Sekuru Vanasekuru:
Achifambira kunababa vake, sekuru vaRory baba vaWilliam Henry Gates Sr. apo ambuya vake amai vake ndiMax Maxwell Gates. William H. Gates aive magweta akakurumbira akabatana Shideler & King. Ukuwo, Mary Maxwell Gates aive muzvinabhizimusi anova mukadzi wekutanga kukwikwidza chinzvimbo chemutungamiri wenyika zvakare saSachigaro weKing County's United Way.
Vanasekuru vababa vaRory, Mary Maxwell Gates naWilliam Henry Gates Sr. 📷: Bornwiki naAlchetron
About Rory John Gates maternal Sekuru Vanasekuru:
Ambuya vaRory amai vaamai vaElaine vaElaine Agnes Ameriand, ivo sekuru vake amai vaamai vaRaymond Joseph French French Jr. Elaine aiita basa rekumba asi Raymond aishanda sainjiniya kuriritira mhuri yake.
About Rory's Hama:
Rory ana babamunini vatatu uye babamunini vaviri. Vanasekuru vake vanonyanya kuzivikanwa ndiKristianne Blake nee Gates, uyo anonyanya kuronga zvemari, naElizabeth Gates, Philanthropist anozivikanwa. Hazvisati zvichizivikanwa kana Rory aine chero muzukuru kana muzukuru.
Vanababa vaRory vanozivikanwa, Elizabeth (L) naKristianne Gates (R). 📷: nyeredzi nyeredzi
Ukatarisa muhunhu hwaRory, hapana mubvunzo kuti ichokwadi kuti akararama hupenyu hwakaderera-hupenyu kubva achiri mudiki. Kuzvarwa muna Chivabvu kunoita kuti munhu wake ave musanganiswa weGemini Zodiac maitiro. Pakupedzisira, Rory Gates haawanzo kutaura nezve kufarira kwake uye kuita zvemitambo.
Nekuda kwekukura kwake, Rory anozivikanwa kuchengetedza hupenyu hwake hwepachivande. Nekudaro, hunhu hwakanaka, sezvavanotaura, hahugone kuvanzika zvachose. Rory John Gates amai vakambotaura kuti nepo mwanakomana wavo achinzwira tsitsi, aine shungu, uye aine mutsa. Chekupedzisira, chinoita kuti Melinda azvikudze, ndechekuti Rory munhukadzi.
Rory John Gates Hupenyu Hwechokwadi:
Rory ane mari inofungidzirwa inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora. Kwaakabva hupfumi hwake kunonyanya kubva mukuchengetedza kwemari kwakaitwa nababa vake vachiri kukura. Kuzvarwa semugari wenhaka wega hupfumi hwababa vake, inongova nyaya yenguva kutozosvikira mambure ake akakosha achaita Skyrock pamusoro pekukosha kwazvo zvazvino.
Rory Gates Imba uye Ngoro
Sezvo Rory asinga shande pama media enhau, pakange pasisina chinyorwa chakaburitswa nezve imba yake internet. Nekudaro, anogara mune yakasarudzika dzimba - Xanadu 2.0 - anokosha madhora zviuru gumi nemaviri nemhuri yake. Kuve akapfuma zvinoratidza kuti Rory zvakare ane mota yemunhu yekubatsira kufamba kwake kubva panzvimbo kuenda kune imwe. Tarisa uone pekugara kwaRory pazasi.
Iye anogara mune inoyemurika dzimba - Xanadu 2.0
Untold Chokwadi nezveBill Gates Son- Rory John Gates:
Kuputira nyaya yedu yeRory John Gates, hezvino zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi izvo zvaizogona kukubatsira kuti unzwisise yakazara yehupenyu hwake.
Chokwadi # 1: Akazvarwa mugore rekutya:
Rory akaberekerwa mugore (1999) reWorld Wide Worry. Kusvika pagore ra2000, kwaive nekutya kuti chaiyo Y2K komputa bug yaizogumisa pasirese. Zvakawanda kudaro, ndege dzakadonha kubva kudenga, uye zvombo zvegore ra2000 zvaigona kupisa netsaona.
Kuti utaure chokwadi, pakanga pasina kumbove neY2K (iyo inozivikanwa mireniyamu bug). Zvekare, ndege, sekufungidzira, hadzina kumboburuka kubva kudenga. Pakupedzisira, zvombo zvinokandwa hazvina kupisa moto netsaona.
Chokwadi # 2: Chitendero:
Vabereki vaRory John Gates vakadzidzisa mwanakomana wavo munzira yemhuri yechiKristu. Anonamata kuchechi yePurotesitendi Reformed nesangano nemhuri yake. Kutenda kwake kwechiKristu kwakabatsirawo zvakanyanya patsika uye pahunhu hwake hukuru.
Chokwadi # 3: Anotevera tsoka dzaBaba vake:
Kusiyana nevana vazhinji vakapfuma, Rory haaite zvinodhaka. Haatomboputa fodya kana kuzvimisikidza mukati mekunhuwa kwedoro. Rory akatarisana nekugadzira zvigadzirwa zvikuru izvo zvaizobatsira nyika, saka anodzivisa chero chinhu chingazomira sechinhu chinokanganisa kwaari.
Rory's wiki zivobase inobatsira iwe kuwana ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Zita rizere Rory John Gates
Zita reNick Rory
Zuva rekuzvarwa 23nd zuva raMay 1999
Nzvimbo yekuzvarirwa Seattle, Washington.
Baba William Henry Gates III
Amai Melinda Ann Gates
Vanun'una Jennifer Katharine Gates na Phoebe Adele Gates
urefu 5 inches 5 inches (5'5 ")
uremu 53 kg (116 lbs)
Tinokutendai nekuverenga Biography yaRory John Gates, mwanakomana weumwe wevakapfuma varume vapenyu. Zvakawanda zvakadaro, ndinokutenda nekutenda mazviri Zvatiri uye Zvatinoita.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa paRory John Gates Biography uye Nyaya Yeechidiki, vatariri vedu vakanga vari pahwindo rekunyatsojeka uye kusasarura. Nomutsa isa zvaunofunga kana udza mashoko isu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisinga tarise pane ino chinyorwa nezve Rory.